विश्व नै शाकाहारी भए के हुन्छ? यस्ता छन् ८ तथ्य - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । यदि विश्वभरका सबै मानिस सधै‌ंका लागि शाकाहारी भए यसको प्रभाव जलवायु, वातावरण, हाम्रो स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला?
याे पनि पढ्नुस कोरोना महामारीः विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ८३ हजार नाघ्यो
याे पनि पढ्नुस ‘कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मार्च १ पछि विश्वभर दर्जनौँ पत्रकारको मृत्यु’
याे पनि पढ्नुस मासु नखानेले खानै पर्ने यी ८ चीज
तर, हामीले पोषणका केही वैकल्पिक खानेकुराले मासुलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले विश्वभर करिब दुई अर्ब मानिस कुपोषणग्रस्त भएको अनुमान गरिन्छ। खाद्यान्नको तुलनामा मासु र यसबाट उत्पादित खानेकुराबाट धेरै पोषण प्राप्त हुन्छ। स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट साभार
ट्याग्स: विश्व, शाकाहारी